Webmin: fitantanana avy amin'ny tranokala | Avy amin'ny Linux
Webmin fitaovana io fananganana rafitra idirana Fomba Internet ho an'ny OpenSolaris, GNU / Linux ary rafitra Unix hafa. Amin'izany no ahafahanao manamboatra endrika anatiny amin'ny rafitra fiasa marobe, toy ny mpampiasa, ny quota habaka, ny serivisy, ny rakitra fikirakirana, ny fanidiana ny solo-sainanao, sns. , MySQL, DNS, Samba, DHCP, ankoatry ny hafa.
Ny command console na terminal dia ny antsy miaramila Swiss an'ny mpandrindra Linux, saingy misy safidy hafa. Ny iray amin'izy ireo dia webmin -zaraina amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana BSD- izay mamela ny fitantanana an-tsary ny Linux amin'ny alàlan'ny Internet browser.
Raha tsy mpandrindra Linux ianao fa tena manintona anao mitantana mpizara tranonkala, mailaka, tahiry data, ity dia fotoana lehibe hanombohana hahatakarana ny fiasan'ny asan'ny administratera sysadmin iray, avy amin'ny fiononan'ny tranokalanao.
Webmin dia voasoratra ao amin'ny Perl version 5, mihazakazaka ho toy ny mpampiantrano azy manokana sy ny fizotrany. Amin'ny alàlan'ny default dia mampita amin'ny alàlan'ny TCP amin'ny seranan-tsambo 10000 izy io, ary azo alamina hampiasa SSL raha toa ka napetraka miaraka amin'ny modely Perl ilaina fanampiny ny OpenSSL.
Izy io dia natsangana avy amin'ny modules, izay misy interface amin'ny rakitra fisie sy ny mpizara Webmin. Izany dia manamora ny fanampiana fampiasa vaovao tsy misy fiezahana be. Noho ny famolavolana modular an'ny Webmin, azo atao ho an'izay liana ny manoratra fanitarana ho an'ny fikirakirana ny birao.
Webmin dia mamela anao hifehy masinina maro amin'ny alàlan'ny interface tsotra, na miditra amin'ny mpizara webmin hafa amin'ny tambajotra subnet na tambajotra eo an-toerana ihany.
Misy kinova hafa manokana momba ny webmin toy ny: Usermin (mpampiasa tsy faka), Virtualmin (Virtualhost) ary Coludmin (rafitra virtoaly).
Azonao atao ny misintona azy mivantana avy amin'ny pejy amin'ny tarbal, RPM na DEB ary manaraka ny webmin wiki amin'ny fametrahana azy.
Ny zavatra voalohany tokony hatao diamanokatra terminal iray ary amboary ny rakitra loharano.list hita ao / etc / apt ho azy ireo soratanay:
Sokafy ny fisie, ampio ireto andalana manaraka ireto:
Vantany vao vita, tahirizo ny fanovana ao amin'ilay rakitra. Avy eo ahoAmpidiro ny lakilen'ny GPG ao amin'ny terminal ireto baiko manaraka ireto.
sudo apt-key manampy jcameron-key.asc
Rehefa vita ireo dingana ireo dia havaozy ny lisitry ny tahiry:
Ary farany, apetraho webmin:
sudo apt-mahazo mametraka webmin
Raha hampiasa Webmin dia tsy mila manokatra ny tranokala safidinao ianao ary mampiditra an'ity adiresy manaraka ity: http: // serverip: 10000 /
Fampahalalana bebe kokoa amin'ny: www.webmin.com
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Webmin: fitantanana avy amin'ny tranokala
Hitranga izany satria mampiasa https izy hifandraisana amin'ny Internet, ary tsikaritry ny chrome fa tsy taratasy fanamarinana nosoniavin'ny CA sasany izany.
Tsy misy olana amin'izany.
Vao avy nametraka sy nanandrana azy io tamin'ny solosaiko findrako aho ary mahagaga ny habetsaky ny fampahalalana apetrak'ity rindrambaiko ity momba ilay rafitra, amin'ny alàlan'ny browser.
Mazava ho azy, talohan'ny nidiranao dia nanome fampitandremana momba ny fiarovana i Chromium, iray amin'ireo matotra izay hivoaka rehefa miditra amin'ny tranokala kely fitokisana ianao. Ho fantatry ny mpampiasa voalohany.
Mahita tsara tokoa. Salama.
Manampy azy pofa ny isistes
Tsy afaka miditra amin'ny lalana / sns / apt toa ny nataoko sy nanandrana aho fa tsy nisy
Fantatro fa somary tara ny fanomezana an'ity valiny ity, saingy mety hahasoa hatrany an'ireo olona manana io olana io. Angamba ny olana dia tsy maintsy sokafana miaraka amin'ity baiko ity ny rakitra: sudo gedit /etc/apt/source.list mba hahafahana mampiditra ny tsipika. Zavatra iray hafa, ny teny gedit dia mpamoaka lahatsoratra ampiasaina amin'ity ohatra ity, fa mety nano na hafa. Ary farany, tsy voatery mila manoratra sudo ianao raha toa ka efa superuser.
Tsy hita izy io mba hanondroana fa ny rakitra loharano.list dia mety tsy ho ao amin'io làlana io, miankina amin'ny fizarana, azo jerena ao amin'ny fampirimana loharano.list.d ohatra.
Linux Mint 13 KDE RC misy